Betsaka ny ankizy niditra an-tsekoly tamin’ity taom-pianarana vaovao ity raha ny tatitra navoakan’ny lehiben’ ny Fari-piadidiam-pampianarana na Cisco tamin’ny faritra Atsimondrano sy Avaradrano. Nahitam-piakarana 5 % ny mpianatra niditra an-tsekoly tao amin’ ny Cisco Atsimondrano.
“Tonga ara-potoana ny fitaovam-pianarana nozaraina ary niampy ny mpampianatra avy amin’ny fikambanan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra Fram noraisina, ka kely ny vola naloan’ny ray aman-dreny no antony nampiakatra ny tahan’ny ankizy niditra an-tsekoly”, hoy Ramananjatovo Arsène, lehiben’ny Cisco Atsimondrano.
Ny faritra Avaradrano ihany koa nahitam-piakarana 7% ny tahan’ny mpianatra niditra an-tsekoly. “Tsy ampy ny fitaovam-pianarana tamin’ ity taona ity noho ny fitomboan’ ny mpianatra. Ny fotodrafitrasa ampy ihany satria ny fanjakana miezaka manamboatra. Ny olana anefa, tsy ampy ny mpampianatra indrindra any ambanivohitra ka voatery mitana kilasy roa ny mpampianatra iray”, hoy Rakotomalala Dera, lehiben’ny Cisco Avaradrano.
Voatery mihafy ny mpianatra amin’ny tsy fahampian’ny latabatra sy ny seza rehefa betsaka ny ankizy, toy ny etsy amin’ny Anosibe satria lasa 2 700 ny mpianatra raha toa ka 2 200 tamin’ny herintaona.